Yaxye Yaasiin Xasan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
About the Author Yaxye Yaasiin Xasan
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Qoraagga ayaa qoray buuggaag kala duwan sida buugga Baadigoobka Guusha, Wahsi Tire iyo iyo qoraalo kale oo badan. Qoraagga waa aqoonyahaan cilmiga xanaanada xoolaha. Waa aqoonyahaan Soomaaliyeed oo aad u xiiseeya wax qorista. Qoraaladda qaarkiisa uu qoraaggaan leeyahay waxaad ka heli kartaa Tuke Somalism.
Dhammaan sababaha keena wahsiga ayaa looga guuleysan karaa in aad samaayso waxyaabahan:- Hadaf: Waa in aan yeelanaa hadaf iyo meel aan doonayno inaan so taabano nolosheenna, inaga oo raacinayna go’aan dhab ah iyo dadaal joogta ah oon ku xaqiijinayno hadafkeenna. Dadaalka ayaa muhiim u ah dabargoynta wahsiga, waxa uuna keenaa natiijo lagu qanco taasoo laga gaadho wahsiga. 2. Qorshe: Waa in qofku samaysto jadwal nololeed wakhtiyaysan si u maareeyo shaqo kasta iyo wakhtigeeda; aadna ku qorto maalin walba hawshaad galayso, waxayna kuu saamaxaysaa inaad ahaato mid firfircoon, waxqabadna ku talaabsada. Qorshuhu waa waxa fududeeyaa suurtogalna ka dhigaa hawl culus, oo …
Dhiganahan kooban waxaynu ku dul joogsan doonnaa wahsiga iyo caajiska. Aan ku bilawno su’aallo kala duwan oo dadku iswaydiiyaan, balse inta badan jawaabahooda ay isku waddo mariyaan. Waa maxay wahsi? Waa maxay caajis? Waa maxay farqiga u dhexeeya wahsi iyo caajis? Haddii aan ku bilowno wahsi: wahsigu waa daal maskaxeed ku dhaca dadka, Kaasoo yareeya doonista iyo firfircoonida shaqsiga. Caajisku waa daal jidheed ku dhaca dadka, kaasoo keena wax qabad la’aan qofka oo doonaya in uu wax xaqiijiyo. Caajisku darajo ahaan waa uu ka hooseeyaa wahsiga. Waa tamar darro ruuxi ah oo ku dhacda awoodda qofka. Wahsi iyo caajis waa …
GODOB JACEYL – Goormaad Qancaysaa Nafyahay? – Q2aad
Yaxye Yaasiin Xasan, July 8, 2019
Si aad ula socoto Sheekadaan taxanaha ah qeybtaan tii ka horeysay halkaan ka aqriso: http://www.tukesomalism.com/archives/10555 Siciid Cali Cismaan wuxuu ahaa arday laba waallalo ah kala dhaleen cabdirashiid diiriye jaamac. Wuxuu dugsi dhexe ka dhigan jiray magaalada Heego. Wuxuu ahaa arday jacel inuu barto dhammaan ba dhaqanka iyo hiddaha. Sidaas daraadeed, xiliga fasax dugsiyeedka lagu jiro wuxuu u caano-doonan jiray Miyiga. Markii la gaadhay Fasaxii waynaa ee sannad dugsiyeedka, Siciid wuxu aaday deegaanka reerkoodu dago. Xilli barwaaqo ah buu gaadhay, reerahoo deggan Dhumay oo aad u deellan, waa meel jawi fiican, kulayl iyo qabowna daa warkii. Waa meel hawo dhexdhexaad ah. Waa …
GODOB JACEYL – Goormaad Qancaysaa Nafyahay? – Q1aad
Goormaad qancaysaa nafyahay Miyaad quustaba aqoon Qofkii hore kuu dayacay Maxaad ka doonaysaa? Ammintu waa 12:30 duhurnimo, cadceedu kala barka cirka ayey joogtaa, Jawigu kulayl iyo huur ayuu leeyahay, kulayl dartii shimbirihii hawada sare duulayey baa geedihii qallalay ee dhulka qod ahaan u taagnaa, miciin bidaya.Waxaa dhacaya hanfi, dabayshii xagaaga oo olol iyo humre wadata baa wajiga ka leefaysa, indhahana aragga ka naaqusinaysa. Dhulka waxaa ka kacaysa siigo ilaa cirka isku sii dhererinaysa, dadku waxay ku jiraan abaar ba’an iyo macluul, ceelashii ay dadka iyo duunyadu ka cabbi jireen baa wada gudhay, Iska daa geed midhood iyo xaab ay …
Odhaahyo murti ah: “Hadii aanad duuli Karin orad, hadii aanad ordi Karin lugee, hadii aadan lugayn Karin gurguuro, balse si kasta oo aad samaysid ha joojin hor u socodka.” Martin Luther King “Waxaan soo guuldarreystay marar badan taasina waa sababta aan u guulaystay.” Micheal Jordan “Guuldarradu waa keliyaata fursad labaad si aad mar labaad u bilawdid balse markan xariifnimo dheeraad ah ayaa lagaa rabaa.” Henry Ford “Waxaa jira habka fiican oo loo sameeyo – soo hel.” Thomas Edison “Maan guuldarraysan waxaan kaliya helay 10,000 oo waddo oo aan shaqaynayn.” Thomas Edison “Anigu waa aan aqbali …
Ugaadhsade iyo Shimbir – Sheeko Xikmad Leh
Nin ugaadhsade ah baa maalin maalmaha ka mid ah ugaadhsi tegay. Wuxu maalintii oo dhan keynta dhex jibaaxaba, markii uu waayey wax ugaadh ah oo wakhtiguna noqday goor casar gaaban ah oo ninkiiba damcay inuu iska hoydo, ayuu shimbir ku taagnaa geed aan isagaba sidaa uga durugsanayn halkaa ka ciyey. Ninkii baa qalabkiisii ugaadhsiga ee uu xareeyey intuu la soo baxay ayuu si fiican shimbirkii u shiishay oo deeto dhulka soo dhigay. Shimbirkii baa markii uu ugaadhsadihii gacanta ku dhigay ku calaacalay oo yidhi “illeen nabadgelyadayduba waxay ku jirtay aamusnaanta, oo haddii aan iska aamusi lahaa illeen w’aan nabadgelilahaa.” ‘Farxad …
‘Markaad rabto nolosha inaad guul ka gaadho ha moogaan samirka iyo dulqaadka oo ah labada shay ee aan noloshu ka maarmi Karin si aad uga badbaado guul daro. samirku waa sahayda guusha, dulqaadkuna waa shidaalka.’ Amaal Bashiir Garaase Samirku waa halbawlaha shay wal oo la qabanayo, samirku waxa uu uga taagan yahay arrimaha halka uu madaxu uga taaganyahay jidhka samirku waa hoyga halyeeyada adduunka ,lama arag adduunka nin libaaxa hadii la arkayna waxa uu ku mutaystay halyeeynimada adkaysi iyo u dhabar adayg uu u dhabar adaygo dhibaatooyinka soo maraya, haddaba adduunka lama arag cid bilaa Samir ah oo guuleysata. maxaayeelay …
‘Halgan la’aan, ma jiri karo horumar.’ _Frederick Dougles Macalin Biology ayaa barayay ardaydiisa sida diirtu(diirdiir) ay isagu bedesho balanbaalis. Wuxuu ku yiri “labada saac ee dambe balanbaalistan waxay la halgami doontaa siday uga soo bixi lahayd qolofta ku dahaaran, qofna yuusan caawin.” Wuuna tagay. Ardaydi waa sugeen wayna dhacday. Balanbaalisti waxay larafatay inay ka soo baxdo qolofta, Arday ayaa ka naxay wuxuna go’aansaday inuu caawiyo siday u soo bixi lahayd, iskana dhegatiro waanadi macalinkiisa. Wuxuu jebiyay qolofti si ay uga soo baxdo oo aysan u halgamin waxbadan. Balse wax yar ka dib balanbaalisti waa dhimatay! Goortii macalinka soo noqday, waxaa …
Ardey caajisloow ah, habeenkiina dhafri jiray, ayaa maalin maalmaha kamid ah, waxa uu kasoo qeyb galay, muxaadaro kasocoty jaamacad, taasoo macalinku uu ku sharaxayey cilmiga xisaabta iyo dhibaatada laga maro barashadiisa. Ardeygii ayaa fasalkii ku dhex hurday ayadoo muxaadaraadii socoto, waxa uuna soo toosay ayadoo fasalkii lagu kala dareerayo, durbadiiba inuu baxo ayuu bilaabay, balse wuxuu eegay sabuurada, wuxuuna arkay qoraal xisaabeed aad u fara badan oo ku xardhan sabuurada. Ardeygii ayaa fasalka kusoo noqday, waxa uuna bilaabay inuu min guuriyo wixi sabuurada ku qornaa, isagoo buugiisa ku qoronaya, waxa uuna naftiisa ka dhaadhiciyey in waxani yihiin, waajib ama shaqo …
Sirta Guusha Ee Dale Carnegie
‘Si kasto oo ay wadadu u dheertahay haddii aadan istaagin bar dhamaadka wadada waa gaadhi.’ _Yaxye Y. Xasan Noqo qof saaxiibtinimo leh: Ha dhaleeceynin, cambaareynin ama ha caban. Daacad u ahaw qofka kale. U riyaaq rabitaanka qofka kale. Si dhab ah u danee dadka kale. U dhoola cadee. Xasuusashada magaca qofka uu u yahay qofkaas codka ugu macquulsan uguna muhiimsan ee luuqad kasta. Noqo dhegeyste wanaagsan, dhiirigeli kuwa kale inay ka hadlaan naftooda. Ka hadal marka laga hadlayo danaha qofka kale. Dareensii qofka kale inuu yahay muhiim si daacad ahna wax kugu ugu qabo. Siyaabaha aad fikirkaaga dadka uga dhaadhicin …